ကိုယ့်အတွေး နဲ့ ကိုယ် ( CH5Plus) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » ကိုယ့်အတွေး နဲ့ ကိုယ် ( CH5Plus)
ကိုယ့်အတွေး နဲ့ ကိုယ် ( CH5Plus)
Posted by ကထူးဆန်း on Mar 30, 2012 in Society & Lifestyle, Style & Beauty |9comments
Challenge Changing တဲ့ ။ Channel5plus ကနေ တင်ဆက်နေတဲ့ ပရိုဂရမ် ပါ ။
တင်ကြိုပြင်ဆင်ပြီးမှ ရိုက်တာလား ။ တကယ်လားတော့ မသိပါဘူး ။ shopping mall ထဲဝင်လာတဲ့ မြန်မာ လို ရိုးရိုးယဉ်ယဉ် ၀တ်ထားတဲ့ သူကို ဒီလိုပြင်လိုက်ပါလားလို့ ဆိုပြီး တင်ဆက်နေတဲ့ ပရိုဂရမ်ပါ။
ပထမဆုံးတစ်ခါ ကြည့်ဖြစ်လိုက်တော့ အံ့သြသွားခဲ့ပါသည် ။ ကင်မရာ မရှိခဲ့ လို့ ရိုက်မပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး ။
ဒီတစ်ခါ ဖွင့်လိုက်တော့ အစမမှီလိုက်ပါ ။ အ၀တ်အစားရွေးတာ မမီလိုက်ပါဘူး။ ဖိနပ်ရွေးတာကနေ စလို့မီလိုက်ပါသည်.
ဒါကတော့ မပြင်ဆင်ရသေးဘူးပေါ့နော် … အ၀တ် အစားတော့ ရွေးပြီးသွားပါပြီ ။ မမှီလိုက်လို့ မရိုက်လိုက်ရပါ။
ဆံပင် ပြင်ပြီးတော့ ဂလိုလှသွားပါတယ် လို့ ဆိုပါသည်။
မိတ်ကပ် ပညာရှင် နဲ့ ပြင် အပြီးပါ။ မိတ်ကပ် ပညာရှင် က အမျိုးသမီး သည် ဆရာဝန် အိမ်ထောင်ရှင်ဖြစ်သည့် အတွက် ရှင်ရိုသေ လူရိုသေမို့ အများကြီး မလုပ်ထားပါဘူးတဲ့။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နဲ့ အလုပ်နဲ့ လိုက်ဖက်ရုံလောက်သာ လုပ်ပေးထားပါတယ် တဲ့။ ဒါတော့ သူ့ကို လေးစားရမလိုဖြစ်သွားပြီ ။
ဆေးစားပြီးပုံ ပါ ။
ဒီလို ပရိုဂရမ်တွေ လွှင့် သင့် မသင့် ကတော့ ဘယ်သူဆုံးဖြတ်လည်း မသိ။ စပွန်ဆာပေးပြီး တ၀ကြီး ကြော်ငြာလိုက်တဲ့ ဖိနပ် ကုမ္မဏီကလား ..
မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ထိန်းသိမ်းပါ ဆိုပြီး တွင်တွင်ကြီးအော်နေတဲ့ ပြန်ကြားရေး ၊ ယဉ်ကျေးမှု့ ၀န်ကြီး ဌာနတွေက ဒီလိုမျိုးတွေ ကတော့ ခေတ်နဲ့ အညီ ဒီမိုကရေစီပါဆိုပြီး တဘက်လှည့်နေကြတာလား ။
သေချာတာတော့ ကထူးဆန်းတို့ ဒိတ်လွန်ကြီးတွေ ဖြစ်သွားပြီး ဒီလို ပရိုဂရမ်တွေ ပြသတာ ကန့်ကွက်ချင်တာပါဘဲ။ ကိုယ့် အတွေး နဲ့ ကိုယ်ပေါ့နော်..
အဲအစီအစဉ်ကြည့်ဖူးပါတယ်အေ …. ပြင်လွန်းဟိုဟာချွန်းဆိုသလို လှလည်းမလှပါဘူး … တစ်ချို့ဆို ဆံပင်ကငှက်သိုက်ကေ အိပ်ယာထကေတွေနဲ့ ဆံပင်တွေကို ဖျက်ဆီးလိုက်သလိုပဲ …. နာတောင် မကြုံလို့ ကြုံရင် အပြင်ခံကြည့်ချင်သား …..
အရင်တုန်းက 5plus က 5series2 နာမည်နဲ့နောက်မှ ပြောင်းသွားတာ
ဟီး သားကတော့ကြည့်တယ် ကောင်မလေးတွေလှရင်
ဟဲ့ ဖရဲမ ဘာသား သားလဲ ညည်းနဲ့အေ …. မီးမီးကလို့ပြောရမှာလေ ….
မီဒီယာတွေက ဘယ်လိုပဲ လုပ်ပြ လုပ်ပြပါ ကိုယ်ထူးဆန်းရေ … ဟတ်မထိလောက်ပါဘူး … ။
ပုံမလာ ပန်းမလာ စည်ပိုင်းရှိတ်ကြီးကို ထုံးသုတ်ပြီးပဲအရောင်ပြောင်းပြောင်း ၊ ကတ္တရာစေးပဲ ခြယ်ခြယ် … မြင်ရတဲ့လူက လိုက်လုပ်ချင်အောင် မဆွဲဆောင်နိုင်ပါဘူး … ။ ဆိုလိုတာက … ပြောင်းတာ.. မပြောင်းလဲတာထက် ..ပုံစံ ပြောင်းခံရတဲ့ လူရဲ့ …. အလှပနဲ့အချိုးစားပေါ်မူတည်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ …. ။
ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ဟိုအော်ဒီအော်တွေအော်နေတဲ့အချိန် ၊ မြန်မာဝတ်စုံလည်း တခေတ်ဆန်းလာတဲ့အချိန်မှာတောင် … ကိုယ်တိုင်မ၀တ်လျှင်တောင် .. ၀တ်နေတဲ့လူတွေ စိတ်ထွေပြားအောင်လုပ်တဲ့ အဲ့ဒီအစီစဉ်ကို မလွှင့်သင့်ဘူးထင်ပါတယ် … ။
ပြောမယ့်သာပြောတာ … အပေါ်က အစ်မကြီးပုံက မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ ပိုပြီး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိတယ် … ။ စကပ်နဲ့ ကိုယ်ကျပ်နဲ့က စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့
ဟုတ်တယ်…… အိတုန်ပြောတာ ထောက်ခံတယ်……..
ဒီအစဉ်က သိရသလောက်ကတော့ ကြိုတင်ပြီး ရိုက်ကူးထားတာမျိုးပါ
သိရသလောက်ကတော့ အစီမစဉ်မှာ ပါချင်တဲ့ သူတွေက အလှဓာတ်ပုံနဲ့အတူ
လျှောက်လွာတင်ရတယ် ဆိုလားပဲ …………
ဒါနဲ့ စီဂျေကြီး အဝတ်လဲခန်းအစီအစဉ်ဘာလို့ပါအောင်မရိုက်လိုက်တာလဲတဲ့ ဒေါ်ဖြဲကမေးနေတယ်။
မြန်မာအမျီုးသမီးအကြီးတွေက.. တင်ကြီးကြီး. .ပေါင်တုတ်တုတ်နဲ့.. အဲလိုသာ.. ဘောင်းဘီနဲ့လုပ်လိုက်ရင်..
ဘယ်လိုကို ..ပျက်မှန်းမသိ… စိတ်.. :?
ဘယ်လိုပဲပြင်ပြင်… ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်ကို ခေတ်မှီအောင်လုပ်တော့ ပုံစံမကျတဲ့သူက မကျတွေဖြစ်ကုန်တာလည်း မြင်ဖူးပါတယ်။ ဒီလိုအစီအစဉ်တွေက တစ်ခါတလေ ကြည့်ရတာ ပိုလွန်းနေသလိုပဲမြင်မိတယ်။